ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ချိန်းတွေ့ – သင်သည်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနေကြ?
"ငါတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့မုန်း" ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမကြာခဏငါ့အမျိုးသမီးများ clients များထံမှနား ထောင်.acomment ဖြစ်ပါသည်. ချိန်းတွေ့ဆီသို့ဦးတည်ဒီအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးဤမျှကာလပတ်လုံးအတွက် 'ဖမ်း' နှင့်တစ်ခုတည်းနေထိုင်နိုင်သောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ကျွန်မလုံးဝမှားယွင်းတဲ့စိတ်ကိုထားနှင့်အတူချိန်းတွေ့ငါ့နည်းပြအလေ့အကျင့်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်အနှံ့လာအမျိုးသမီးအများစုဟာ, သူတို့ချိန်းတွေ့ချဉ်းကပ်လမ်းကိုအမှန်တကယ်မိမိတို့၏ဘဝအဖော်တွေ့ဆုံသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို sabotages အဓိပ္ပာယ်.
သို့သော်လည်းဒီသဘောထားလုံးဝနားလည်နိုင်ပါတယ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အရှိဘူး, ဂိမ်းထဲမှာရရန်မိမိကိုယ်ကို '' အတင်းအကျပ် '', အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသို့တက်လက်မှတ်ထိုး, မက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့် trawling တခါတရံတွင်အရေပြားတွားစေသော, မကြာခဏအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေနှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောမှ, သူသဘောကောင်းကြည့်သောကြောင့်, နောက်ဆုံးမှာတစ်စုံတစ်ဦးကအခွင့်အလမ်းပေးခြင်း. ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း, နောက်ပြန်နှင့် forward လုပ် chatting လုပ်နေကြတယ်, ဖြစ်ကောင်းပင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတုန်ခါမှုတွေရရန်အစ - သူသဘောကောင်းပုံရတယ်, သူပုံထဲမှာကြည့်အတော်လေးကောင်းပါတယ်နှင့်တစ်ဦးကိုအတိအကျ connection ကိုလည်းမရှိ. ဒါကြောင့်သင်ကအစည်းအဝေးစီစဉ်. သင်သည်ဦးနှောက်အာရုံကြောများမှာ, သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်တွေအများကြီးသုံးဖြုန်း, အကယ်. သင်သည်အမှားလုပ်နေပါတယ်လျှင်သင်စဉ်းစား, သင်မူကား, အားထုတ်ပါစေ, သင့်ရဲ့အင်္ကျီကိုအပေါ်ဆွဲတင်နိုင်, ချမ်းသို့ထွက်သွားလေရာရာအရပ်နှင့်သွားရောက်မည် (မကြာခဏနာရီအနည်းငယ်ပင်) သင့်ရဲ့နေ့စွဲခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. သင်ယခုစိတ်လှုပ်ရှားခံစားနေကြ, အားလုံးအပြီးသူက 'တ' 'ဖြစ်နိုင်.
ထို့နောက်သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရ! သူသည်မိမိအဓါတ်ပုံတွေကိုတူ NOTHING ကြည့်ကြောင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်ကို drop, တကယ်တော့သူက 'Beck' 'ထက် ပို. ' 'Shrek' ပဲဖြစ်တယ်. သူကပြောသည်ထက်နှစ်လက်မတိုတောင်းင်, အဲဒီဓါတ်ပုံတွေကိုသိသာထင်ရှားစွာအပိုအလေးချိန်နဲ့ဆံပင်၏ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခြင်းကြောင့်စွာစီရင်တော်မူလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာခေါ်ဆောင်သွား! သင် weakly သူ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးဖို့ 'ကိုယ်တိုင်စမ်​​းသုံးကြည့်' ဖို့ဖြေရှင်းရန်သို့သော်, ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရပ်၌အအပေါင်းတို့သည်လမ်းသို့ လာ. ဆိုလို! သင်က soggy ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူခံစားပြီးသင်ချက်ချင်းသင့်ထွက်ပေါက်စီစဉ်စတင်ရန်အဖြစ်ခန့်သလောက်သံလိုက်ရှိပါတယ်. သို့သော်သင်ကားရား၏ပြင်းပြနာကျင်စွာနာရီမှတဆင့်ထိုင်ဒါရိုင်းစိုင်းဖြစ်ချင်ပါဘူး, အများကြီးအဘယ်အရာကိုမျှလောက်ယဉ်ကျေးစွာစကားပြောဆို, သင်ရုံသွားရရန်ယားနာနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်. အွန်လိုင်းမရှိသည်ကို connection ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါဘယ်နေရာမှာဖြစ်သည်နှင့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှစ်မျိုးလုံးမသက်မသာခံစားနေကြ. သင်သည်မိုဃ်းကိုရွာစေအတွက်ချန်ထားသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအချိန်ယူဘယ်ကြောင့်အသင်စဉ်းစား, ငွေနှင့်အခြားရက်စွဲအပေါ်မှာရောက်လတံ့အားထုတ်မှုနဲ့သင်အိမ်ပြန်, ရှက်ကြောက်ခံစားနေရတယ်နှင့် ပို. ပင်ခိုင်မာစွာပဲ, သင်တို့အဘို့ထဲကတစ်ခုခု့လျောက်ပတ်သောလူတို့သည်ထိုမဟုတ်သည့်ယုံကြည်ချက်အတွက်ခိုင်ခိုင်မာမာ Head! ဒါဟာအံ့သြစရာအမျိုးသမီးတွေမျှော်တိုက်ကျွေးရမယ့်.
ချိန်းတွေ့ နိုင် စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ကြောင့် demotivated ရလွယ်ကူသည်. ဒါဟာသင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပွားခံစားရကြောင်းလူများတို့နှင့်အတူရက်စွဲများတစ် string ကိုအပေါ်သွား wrenching ဖျန်နှင့်ပင်နှလုံးခံစားနိုင်ပါတယ်, နှင့်အထပ်ထပ် dashed မိတ်ဖက်အစည်းအဝေးသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်. သင်ချိန်းတွေ့တွေအများကြီးလုပ်ဆောင်ဖို့နှင့်အချို့အမျိုးသမီးများသည်အလွန်အဆိုးမြင်နှင့်ပင်ကျောက်စိမ်းဖြစ်လာနိုင်သည့်အခါ burnout ၏အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်. သူသည်ဤ mode မှာအခါဤအကြောင်းကြောင့်အလျှင်းသင့်အခြေအနေကိုကူညီမယ့်ဖြစ်ပါတယ်, သူတစ်လျှောက်လာပါဘူးတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုတည်းသောမိန်းမကိုအလွယ်တကူစကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲသူမ၏မစ္စတာညာဘက်လက်လွတ်နိုင်.
သင်သည်အမျိုးသမီးအများစုကတကယ်တော့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသူတို့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည့်အခါလက်ထပ်ဖို့သွားသောလူကမကျင့်ကိုငါသိ၏ခဲ့ပါ? စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော! The Daily သတင်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကလှည့်ပတ်ကခန့်မှန်း 22% စုံတွဲများ၏လုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုဖြစ် – ဆွဲဆောင်မှုသဘာဝကျကျဆောက်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုသောကြောင့်က, အချိန်ပို. အများအားဖြင့်အမှုများတွင်သူမကြာခဏသင်အွန်လိုင်းကိုယ်တော်ကိုခရီးဦးကြိုခဲ့လျှင်သင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပြီဘယ်တော့မှမယ်လို့တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, သင်သည်သင်၏ပွဲများမှတဆင့် sifting သကဲ့သို့စိတ်တွင်ထမ်းတစ်ခုခု.
သင်အမှန်တကယ်စတင်ခံစားနိုင်အောင်ကောင်းပြီတကယ်တော့ရှုထောင့်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အဆိုင်းအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အချိန်းတွေ့၏တပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့် ဒီထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသင့်လူကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်. အမျိုးသမီးများ '' အဖြစ်ချိန်းတွေ့ကြည့်ရှုခြင်းစတင်နိုင်လျှင်ပျော်စရာအလေ့အကျင့်'' သူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုပြီးအောင်မြင်မှုရလိမ့်မည်, လည်းသူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုလုပ်ငန်းစဉ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်အဘယျသို့အတိအကျ '' မပျော်စရာအလေ့အကျင့်'' ယုတ်?
ဤသိကောင်းစရာများကို 'ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်ပျော်စရာအလေ့အကျင့် '' အောင်မြင်ဖို့အတွက်ချဉ်းကပ်မှု.
1. အစီအစဉ် drop.
အလားအလာရှိသောဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်သူ့ကိုမထင်ကြ, အစားအဒီလူသစ်နှင့်အတူဒီအခိုက်အတန်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နှင့်သူနှင့် ပတ်သက်. စပ်စုဖြစ်. ကျွန်တော့်နေ့စွဲင် – ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေး၏အဘယ်သူမျှမကတိတော်ကိုလည်းမရှိ - ကယ့်ကော်ဖီင်, ဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သမျှအတူတူလုပ်နေကြ. ဒီမှာအကျိုးကျေးဇူးများနှစ်ဆနေကြတယ်, သင်သည်နှစ်ခုစလုံးဖြေလျော့နိုင်အောင်ဦးစွာကအားလုံးကိုဖိအားကိုချွတ်ယူပါလိမ့်မယ်, သောသူခံစားရလိမ့်မယ်. အများစုမှာသူတော်ကောင်းတို့၏တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဦးနှောက်အာရုံကြောများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်မ, သို့သော်ယခုငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှါထားကူညီပေးပါမည်. ဒုတိယအချက်မှာသင်ကြိုက်သူအမျိုးသားတစ်ဝှမ်းဖြစ်ခြင်းကျင့်သုံးရ, သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတက်အဓိပ္ပာယ်, အခါ 'သင့်သောသူကို' သင် '' သဘာဝ '' ဖြစ်လာကြပြီသင်တို့ကိုသူ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပေါ်လာပါဘူး.
သူတို့ကိုသင်တို့မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူဖြုန်းဖို့အရမ်းရှည်လွန်းသောကြောင့်ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ရက်စွဲများအတွက်ညစာရက်စွဲများကိုလက်မခံပါနဲ့. တစ်နာရီအချိန်တိုင်းအစည်းအဝေးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးမောင်နှံဖြုန်းဖို့ပဒေသာဖြစ်ပါသည်. တိုတိုနှင့်ထိခိုက်မှုကျမတို့ဒီမှာသွားကြသည်ကားအဘယ်သို့. ဒါဟာသင်စမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လူတော်တော်များများတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေစဉ်လွန်း burnout ကိုကူညီကာကွယ်ဦးမည်.
ဒီစွမ်းအင်နှင့်ကြေကွဲစရာတွေအများကြီးကိုသက်သာစေသည်. သင့်အားဒေသခံနေသောသာရက်စွဲကလူတွေကိုစည်းကမ်းရှိသည် (တစ်နာရီရဲ့ခရီးသွားလာအကွာအဝေးထိပ်များအတွင်း). အများစုမှာအွန်လိုင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေများကိုသာသင်တယောက်အကွာအဝေးအတွင်းကလူကိုထည့်သွင်းရန်သင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေမွမ်းမံနိုင်သည့် feature တစ်ခုရှိသည်. သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၌သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းမှီတိုင်အောင်သင်သည်အမှန်တကယ်တစ်စုံတစ်ဦးမသိကြပါကိုသတိရပါ, ဒါကြောင့်သင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံသည့်အခါရုံမျှမရှိကြောင်း connection တစ်ခုအွန်လိုင်းမကြာခဏလည်းမရှိ. ငါသည်လည်းရက်စွဲများများအတွက်မိန်းမအားခရီးသွားလာထိုလူကိုသတ်မှတ်ထားပြီး.
4. ရက်စွဲဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့. ပျော်ပါစေ!
သတိပြု – ဒီအရက်ဟာထရပ်ကားကိုမသောက်မဆိုလိုပေ! တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်တစ်ဦးကိုသောက်လိုလူမျိုးကသင်အမှန်တကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းနှစ်လုံးနေလျှင်သင်တို့ကိုဤနေ့စွဲအပေါ်မည်သို့ခံစားရကြည့်ရှုနိုင်အောင်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောဘဲရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ရုံမျှစွဲစွဲမြဲမြဲ သာ. ကောင်း၏အဘယ်ကြောင့်ငါနားမလည်ပေမယ့်, အရက်အမှုအရာတစ်ဦး rosy တင့်ပေးကမ်းဘဲ. သူ့ကိုသင် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါကယ့်အစားကြည့်ရှု, လူတိုင်းတစ်ခုခုရှိပါတယ်!
5. သူ့ကိုအခွင့်အလမ်း Give.
ဤသူသည်တဦးတည်းကိုတောင်းလျှင်သူတစ်ဦးကဒုတိယရက်စွဲရရှိသွားတဲ့ကိုဆိုလိုတယ်, သင်သည်သူနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံသည်ဟုခံစားရကြောင်းပေးအပ်. သင်သည်သူ့ကိုဒီအခွင့်အလမ်းပေး သော်လည်း သင်သည်သူ့အားဆွဲဆောင်မခံစားရဘူး. ဟုတ်ကဲ့အမှန်တကယ်! ဤအဖြစ်စဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံရှိသည်များနှင့်သူတို့အဘို့အကောင်းမဟုတ်သောယောက်ျားကောက်နေသောမိန်းမတို့အဘို့အ.
ဤသည်မှာတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာဆက်ဆံရေးကရှာကြံကြသူအမျိုးသမီးများအဘို့အကြှနျုပျ၏ခြုံငုံချဉ်းကပ်မှုရှိသမျှတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်သူကဒုတိယရက်စွဲအဘို့အမေးရန်တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်, တဦးတည်းရှိပါလျှင်. ငါသည်လည်းဒီမှန်မှန်ကန်ကန်မှာ dynamic ဆက်ဆံရေးထူထောင်အထောက်အကူပြုတော်မူသောကြောင့်ကွောငျးကသတ်မှတ်ထားပြီး, ငါသည်ဤလူတချို့မှအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည်နားလည်သဘောပေါက်ပေမဲ့. သင်ညာဘက် romanticized စေလို Ladies?
သင်သည်ဤလူတို့နှင့်အတူအရက်စွဲများပေါ်မှာသောအခါသင်သည်ရိုးသားဖြစ်ကြပြီးသင်မည်သို့ခံစားရသည်ဟုဆို, ဒီပထမဦးဆုံးမှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်မပြေလျှင်တောင်မှ. သင်သည်ဦးနှောက်အာရုံကြော / ပျင်းခံစားရလျှင်ဒီတော့ / ကိုသင်ဖော်ပြနိုင်သည်ကိုပယ် / စိတ်လှုပ်ရှား / စိတ်ဝင်စားလှည့်. မ bitchy လမ်းအတွက်, ပွင့်လင်းရိုးသားလမ်းအတွက်. ဒီအမျိုးသမီးတချို့ပူပန်, နှင့်သင်အများစုကိုအမျိုးသားတွေကသူတို့သမ္မတကဆိုပါသည်ထဲမှာ ယူ. ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှာအံ့သြသွားလိမ့်မည်. Plus အားစစ်မှန်သောအတွက်လမ်းဖွင့်လှစ်, ရိုးသားဆက်သွယ်ရေး, နှင့်သူ့ကိုသင့်အဘို့မိမိအဂိမ်းကို adjust နှင့်တက်ပေးဖို့အတွက်လည်းရွှေအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုပေးသည် (သူစဉ်းစားတွေးခေါ်လျှင်သင်ကမြတ်ကြ၏ – သောသင်သည်ကား).
8. ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး Be, စိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေး.
ဤလမ်းချိန်းတွေ့သာသင်ဒါကိုပိုပြီးတော့ခံစားရန်မကူညီကြမည်, သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ 'ဆက်ဆံရေးကကြွက်သား' 'ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ် (တစ်ခိုင်, ဣတ္သောမိန်းမ) အစစ်အမှန်ယောက်ျားန်းကျင်. သင်တို့အပေါင်းသည်ဤသို့ပြုနေတဲ့အချိန်မှာသင်အနည်းဆုံးကမျှော်လင့်သည့်အခါနှင့်သင့်ယောက်ျားသည်တက်ပြပါလိမ့်မယ်!
ချိန်းတွေ့သည်ဤထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ Follow နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံလုံးဝေူပာင်းလဲရေးကိုကြည့်ရှု.